वीरगंज–पोखरिया सडक कालोपत्रे ठेक्कामा ठेकेदारहरूसँग हर्जाना असुल गर्न कारबाई शुरु
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिविस पर्साले विन्दवासिनी–पोखरिया सडक कालोपत्र सम्बन्धमा अख्तियारको २०६८/८/२८ गते गरेको निर्णय बमोजिम नै काम गर्न निर्देशन दिएको छ । शाखा अधिकृत देवकुमार राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७०/३/२० गतेको निर्णय अनुसार २०६८/८/२८ गते गरेको निर्णय बमोजिम कार्य गर्न निर्देशन गरेको हो । जिविस, पर्साले २०६३ भदौ २ गते विन्दवासिनी–पोखरिया सडक कालोपत्र गर्न बिटि/श्रेष्ठ, सिभिल/युएस/सभा, जिया कन्ट्रक्सन, जेभीका सञ्चालक साबिर अन्सारीलाई कार्यादेश दिएकोमा निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौता बमोजिम काम नगरी लापरवाही गरेको हुँदा पटक–पटक ताकेता गरेको र सो ताकेतालाई पनि अटेर गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदारले कबोल गरेको दररेटमा काम सम्पन्न गर्न मन्जुर भए सरकारलाई थप व्ययभार नपर्ने गरी निश्चित समयावधिमा काम गराउनु अन्यथा निजको धरौटी जफत गरी सरकारलाई भएको नोक्सानीको ब्याजसहित हर्जाना असुल गर्न निर्देशन दिएको हो । ठेकेदारको मन्जुरीमा २०६९ जेठ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर
होशियार, वीरगंजमा बर्डफ्लुग्रस्त कुखुरा भित्रियो
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ राजधानीका विभिन्न स्थानहरूमा बर्ड फ्लु देखिएपछि सो स्थानका कुखुरा उपत्यकाबाहिर आउने क्रमसँगै केही ट्रक वीरगंज भित्रिएको आशड्ढा गरिएको छ । राजनधानीका १२ स्थानमा बर्डफ्लु फेला परेको र लगत्तै ललितपुर, भक्तपुरमा समेत बर्डफ्लु देखा परेपछि त्यहाँ रहेका कुखुराहरू उपत्यकाबाहिर ल्याउने कार्य तीव्र भएको र सोही क्रममा पाँच ट्रक कुखुरा वीरगंजतर्फ आएको जिल्ला पशु कार्यालयm ललितपुरले जनाएको छ । वीरगंज आउने ट्रकबारे प्रहरीलाई सूचना गरिए पनि कुनै ट्रक पक्राउ नपरेकोले बर्डफ्लु सङ्क्रमित कुखुराहरू वीरगंज पुगिसकेको अनुमान गरिएको छ ।
निर्माणमा अनियमितताको आरोप
प्रस, वीरगंज, १५ साउन/ ग्रामीण पहुँच तथा विकेन्द्रीकरण परियोजना (आरआरआइडिपी)ले जगरनाथपुर मिलन चोक सडकखण्डमा निर्माण भइरहेको बाटो तथा नालामा अनिमित निर्माण भइरहेको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाएका छन् । सडक निर्माण कार्यको पहिलो चरणमैं गुणस्तरहीन काम भइरहेकोमा गाउँलेहरू आज जिल्ला विकास कार्यालय पर्सा आई मौखिक उजुरी गरेका थिए । गाउँलेहरूले नालामा २ नं. इँटा प्रयोग भएको, सिमेन्ट–बालुवाको मिश्रणमा बढी बालुवा मिसाउँदा पानी हाल्दा सिमेन्ट बग्ने काम भइरहेको गाउँलेहरूले बताए । ग्रामीण पहुँच तथा विकेन्द्रीकरण परियोजना (आरआरआइडिपी)सँग गजुरमुखी/रोशन कन्स्ट्रक्सन जेभी जनकपुरले साढे सात किलोमिटर बाटो बनाउन करिब दुई करोडमा ठेक्का सकार गरेको छ । ठेकेदार हीराभक्तले काम गर्न सुनील झालाई जिम्मा दिएकोमा झाले अनियमितता गरिरहेको आरोप गाउँलेहरूको छ । गाउँलेहरूले पटकपटक झा र जिल्ला बिकास समितिलाई अनियमित निर्माण कार्य रोक्न भने पनि पहल नगरेकाले आज सामूहिक विरोध देखाउने आएको बताए ।
कोकाकोला फूटबल नकआउटमा नेराउमावि सपही विजयी
सिकेन्द्र पासवान, कलैया, १५ साउन/ कोकाकोला फूटबल नकआउट प्रतियोगिता फाइनल खेलमा २ गोलको विरुद्ध ३ गोलले नेराउमावि सपही विजयी भएको छ । १० गतेदेखि सञ्चालित कोकाकोला फूटबल नकआउट प्रतियोगितामा नेराउमावि सपही र नेराउमावि रतनपुरीबीच आज फाइनल खेल सम्पन्न भएको थियो । खेलमा नेराउमावि रतनपुरीले दुई गोल तथा नेराउमावि सपहीले तीन गोल गरेको थियो । खेलमा २० वटा टिमले भाग लिएका थिए । फाइनल खेलको समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेलले विजयी खेलाडीहरूलाई प्रमाणपत्र तथा सिल्ड वितरण गरेका थिए । जिल्ला अध्यक्ष महम्मद सयमुल्लाहको सभापतित्वमा कार्यक्रम शुरु भएको थियो ।
नेपालमा कतिचोटी सिंहानुक जन्माउने हो ?
– गोपाल ठाकुर २०१७ सालमा जनताको अधिकार खोसियो । प्रजातन्त्र मासियो । राजा महेन्द्रले आफैंले दिएको संविधानलाई चपाएर हजम गरे । राजनीतिक दलहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भए । प्रजातन्त्र पक्षधरहरूको लागि कि जेल कि निर्वासन, दुइटा विकल्प मात्रै रहयो भने पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्नेहरूको लागि रामदुहाई भएको थियो । राजतन्त्रबारे नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन अवधारणा संवैधानिक राजतन्त्र हो । तर पार्टीका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सुन्दरीजलको खोरमा थिए । ठीक त्यसको विपरीत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यस बारे शुरुदेखि अहिलेसम्मको अवधारणा गणतन्त्र नै रहेको छ । तर तिनताक पार्टीका नेता डा. केशरज· रायमाझी दरबारमा थिए । ठीक त्यसै बेला कम्बोडियामा राजा नरोदम सिंहानुक आफूखुशी गद्दी त्यागेर सामान्य नागरिक बनेका थिए । नेपालमा पनि राजावादी कम्युनिस्टहरूले राजा महेन्द्रलाई नेपालको सिंहानुक बनाउन पुगेका थिए । तुलना गरेर हेर्दा नेपालको राजतन्त्र कहिल्यै पनि जनताको पक्षमा रहेको देखिंदैन । राणा शासनकालमा तत्कालीन श्री ३ को बन्दी रहेको राजतन्त्रलाई प्रजातन्त्रवादीहरूले नै क्रान्ति
गाविस सचिवलाई कुटपिट गरी रू. सवा लाख लुटे
जनताले यो नगरे के गरोस् त, गाउँलेको कुरा कसले सुन्छ ? सचिवजी त अलि पढेलेखेका छन्, त्यही भएर जिप्रका पुगे । तर सरकारले उनीहरूलाई गाविसमा बसेर काम गर्न पैसा दिन्छ कि वीरगंजमा बसेर । जनतालाई वीरगंज बोलाएर उनीहरूलाई दु:ख दिन्छन्, गाविस सचिव । एउटा गाविसको सिफारिस चाहियो तर गाउँमा सचिव हुँदैन । सचिवजीको मोबाइल नम्बर हुन्छ फोन गर्नुस् त कहिले उठाउँदैनन्, या त स्वीच अफ हुन्छ । यदि उठायो भने भोलि जिविस आएर भेट्नु भन्ने अप्वाइन्टमेन्ट पाइन्छ । फेरि गाउँबाट पूरै दिन पैसा खर्चेर जिविस जानुस् भेट भयो भने काम हुन्छ भएन भने सचिव साहेब कामले गाउँ जानुभएको छ पर्खनुस् बेलुका काम हुन्छ भन्छन् । यसैबीच नेपालका केही जिल्लाका सचिवहरूलाई वृद्धभत्ता आपैंmले कुम्लाउँदै बिल पास गराएका थिए । जनताले यस्तालाई नकुटे के पूजा गर्ने ? –अशोक कुशवाहा
वर्षायाममा पानीटङ्कीका विद्यार्थीलाई समस्या
वीरगंजको आवास क्षेत्र पानीटङ्की तथा मुर्ली बगैंचाका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई वर्षायाममा भोग्नुपर्ने दु:खको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । यस क्षेत्रमा वीरगंजको महत्त्वपूर्ण स्कूल तथा कलेज रहेको सर्वविदित छ । मिनील्यान्ड मावि, बालसंसार मावि, एन्जल मावि तथा बिपिसी कलेज यसै क्षेत्रमा पर्दछन् । यस क्षेत्रमा परेका विद्यालय तथा कलेजका सम्पूर्ण विद्यार्थीले फोहर र दुर्गन्धित पानीको बाटो भएर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ । अरू विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि यस क्षेत्रका बासिन्दा छन् । उनीहरूलाई पनि वर्षायाममा यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ । हाम्रा साथी सिद्धार्थ गुप्ता पनि यसै क्षेत्रका बासिन्दा हुन् र विद्यालय आउँदा र जाँदा उनलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । विद्यार्थीहरूको शरीर कलिलो र कमजोर हुन्छ जसले गर्दा पानीमा बस्ने जनावरहरूले हामीलाई टोक्न सक्ने खतरा हुन्छ । यदि बढी पानी पर्‍यो भने पानीटङ्की र मुर्ली बगैंचाका स्कूलहरू प्राय: बन्द रहन्छ र पठनपाठनमा प्रतिकूल असर पर्छ । पानी जम्दा हाम्रो शहरको सडकको स्तर घटिरहेको छ । वीरगंजमा नालाको पनि राम्रो व्यवस्था छैन जसले शहरको उन्नतिमा असर पर्छ । प्रतीक
एक मनोहर कहानी
- विनोद गुप्ता छैठौ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ‘सत्याग्रह’ले समन्वय गरेको पारोमिता बोहराद्वारा निर्देशित हिन्दी वृत्तचित्र ‘एक मनोहर कहानी’को प्रदर्शन माउन्ट एडमन्ड स्कूलमा आयोजना गरिएको थियो । वृत्तचित्रको कथा भारतको मेरठ शहरमा केन्द्रित छ, जहाँ स्वतन्त्रता र प्रेमको चाहना राख्ने, युवाले केही समयसँगै बिताउन खोज्ने एकमात्र स्थल गाँधीपार्कमा उनीहरू प्रहरी बर्बरताको शिकार हुनु परेको छ । तर अनुसन्धानको क्रममा पछि यो सम्पूर्ण घटना निहित उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रायोजित भन्ने तथ्यसमेत उजागर हुन्छ । वृत्तचित्रलाई समग्रमा हेरेर विश्लेषण गर्दा यसले दुईवटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको मेरो बुझाइ हो । पहिलो हो युवाहरूको चाहना । किन युवाहरू पारिवारिक प्रेमको परिवेशबाट असन्तुष्ट भएर बाहिर जान खोज्छन् ? मनुष्यको जीवनमा दुईवटा वृत्तहरूको अत्यन्त महत्त्व हुन्छ । पहिलो हो –पारिवारिक वृत्त र दोस्रो मित्रमण्डली। बच्चा जन्मेदेखि स्कूल जीवनमा रहँदा पारिवारिक वृत्तको महत्त्व अत्यन्त बढी हुन्छ र उसैका निर्णयहरू बच्चाहरूको लागि निर्णायक हुने गर्दछ । तर स्कूल जीवनको समाप्तिपछि जब बच्चाहरू यौवनावस्थाम
मेन्टेनेन्स नापी कार्यालय पर्साका एक नापी अधिकृतलाई सेवाग्राहीले कार्यकक्षमैं थुनिदिएपछि प्रहरीले उद्धार गर्‍यो । साबिक बिटोरीको जग्गा नयाँ नापीपछि हालसाबिक गर्न नापी कार्यालय धाइरहेका सेवाग्राही जग्गाधनीलाई यो मिलेन र त्यो मिलेन भन्दै लामो समयदेखि नापीका अधिकृतहरूले दु:ख दिइरहेका थिए । साबिक जग्गामा नापी गोश्वाराले पुन: नापी गरेपछि हाल साबिक गर्नुपर्छ । पुरानो पद्धति अनुसार सा·लो वा फित्ता–इन्च–टेपले नापेर नक्सा बनाएका जग्गाहरूलाई नापीको आधुनिक प्रणाली अन्तर्गत ट्रिगोनमिटर सिस्टमद्वारा पुन: नापी गर्ने र नयाँ नक्सा बनाउने कार्य मुलुकभर नै भइरहेको छ । यस प्रणालीमा सबै खाले जग्गाको नाप स्केल फरकफरक नभई समान हुन्छ, अर्थात् मुलुकको जुनसुकै स्थानको जग्गा भए पनि वर्गमिटरमा रूपान्तरण गरिन्छ । पुरानो नापनक्सा स्केलमा रहेका र पुरानो अवस्थामा जुनसुकै तरिकाले कागज प्रमाण बनेको भए तापनि जग्गाहरूको हकभोग,नापनक्सा र कागज पुर्जा एकापसमा नबाझिनेगरी नयाँ प्रणालीमा ढाल्नु नै हाल साबिक हो । पुरानो लालपुर्जा भएको जग्गा, ऐलानी हकभोग, स्ववासी, बिटौरी सबै किसिमका जग्गाहरूको हालसाबिक गर्ने काम मेन्टेनेन
वार्ता नगर्नु अवैध कार्य– अध्यक्ष थापा
प्रस, वीरगंज, १४ साउन/ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेकपा–माओवादीले वार्ता कमिटी गठन गरेर वार्ता नगर्नु अध्यक्ष वैद्यको अवैध कार्य भएको बताएका छन् । देशव्यापीरूपमा प्रशिक्षण शिविर चलाउँदै आउने क्रममा आज वीरगंज आएका अध्यक्ष थापाले नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष वैद्यले चुनाव बिथोल्न खोज्नु गलत भएको बताए । उनले जनताको मत दिने अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गरी गरिने भौतिक आक्रमण गलत भएको दाबी गरे । उनले नेकपा–माओवादीविरुद्ध एमाओवादीको वाईसीएल परिचालन गर्ने धम्की पनि गैरकानुनी भएको बताए । अध्यक्ष थापाले धम्कीको भाषाबाट आगामी संविधानसभा चुनाव हिंसात्मक हुनसक्ने बताए । उनले चार दल र त्यसमा पनि एमाओवादी चुनावप्रति इमानदार नभएको आरोप लगाए । चुनाव बहिष्कार गर्ने दलहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट चुनावमा सहभागी गराउनुपर्नेमा सेना र वाईसीएल परिचालन गर्ने धम्की दिनु सरासर गलत भएको उनको ठम्याइ थियो । अध्यक्ष थापाले चार दलीय संयन्त्रको कारणले अन्य दलहरू चुनावमा सहज सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित भइरहेकाले अवैधानिक चार दलीय संयन्त्रको खारेजीको माग गरे । उनले चार दलीय संयन्त्रबाट गरिने गोलमेच सम्मेलनबाट
आव २०६९/०७० को बजेटमध्ये पर्सामा करिब ५२ करोड रकम फ्रिज
प्रस, वीरगंज, १४ साउन/ पर्सा जिल्लामा आव २०६९/०७० मा ५१ करोड ८९ लाख २८ हजार २ सय ९८ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्साले जारी गरेको वार्षिक बजेट निकासा र खर्चको प्रतिवेदनमा जिल्लामा आएको रु. ३ अर्ब ४८ करोड २७ लाख १७ हजार ६ सय ९५ मध्ये जिल्लास्थित ७३ वटा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले रु.२ अर्ब ९६ करोड १७ लाख ८९ हजार ३ सय ९७ खर्च गरेको र बाँकी रु. ५१ करोड ८९ लाख २८ हजार २ सय ९८ फ्रिज भएको जनाएको छ । आव २०६९/७० मा सबैभन्दा बढी जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साको रु. ३१ करोड २० लाख ७४ हजार १ सय १९ फ्रिज भएको छ भने दोस्रोमा जिविस पर्साको रु. ६ करोड ७२ लाख २४ हजार ६ सय ३० फ्रिज भएको छ । यसैगरी नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन नं. ५ को रु. १ करोड ८५ लाख ५२ हजार ९ सय ४९, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको रु. १ करोड ४८ लाख ५८ हजार ५ सय ८, वीरगंज भन्सार कार्यालयको रु. १ करोड २३ लाख ५३ हजार ५ सय ८४, गुरु गोरख गण आधाभारको रु. १ करोड २३ लाख ३६ हजार ६ सय ९७ र मध्यमाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन नं. ४ को रु. १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय ७ रकम
विवाहित जोडीलाई जबरजस्ती छुटाउन प्रहरीको सक्रियता
प्रस, वीरगंज, १४ साउन/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले एक विवाहित युवतीलाई जबरजस्ती परिवारको जिम्मा लगाएको छ । वीउमनपा वडा नं. १० पानीट्याड्ढी निवासी विवेक साह र सोही स्थान निवासी सिनु हर्षवालबीच एक साताअघि प्रेम विवाह भएकोमा आज प्रहरीले सिनु हर्षवाललाई जबरजस्ती परिवारसँग जान सहमत भएको भनी कागज गराएर पठाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा छोरीलाई बेपत्ता पारेको भनी झूटो विवरण दिएका सिनुका पिता इन्द्रा हर्षवालको उजुरीको आधारमा पर्सा प्रहरीले इन्द्रा हर्षवाल र विवेकका परिवारलाई आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाएको थियो । एक साताअघि प्रेम गरेर बेपत्ता भएका विवेक र सिनुले आफूहरू दुवैले मन्दिरमा भगवान्लाई साक्षी राखी विवाह गरेको प्रहरीलाई बताएका थिए । आफूहरू वैवाहित भएको र एकाअर्कासँग बस्न राजीखुशीले सहमति रहेको बताउँदा पनि प्रहरीले एकतर्फीरूपमा सिनु हर्षवालका परिवारको तर्फबाट महिला प्रहरी लगाइ सिनुलाई यातना दिएर जबरजस्ती कागजातमा सही गराएर परिवारको जिम्मा लगाएका थिए । परिवारका सदस्यहरूले प्रहरी कार्यालयबाटै सिनुलाई जबरजस्ती गाडीमा राखेर लगेका थिए । सिनुले परिवा
सलमान खान कि सलमान खुर्शीद ?
–कुमार रुपाखेती मलाई त कहिलेकाहीं प्रचण्डको तुलना कालीदाससँग गर्न मन लाग्छ, जसले आफू बसेको रूखको हाँगा छप्काउँदै थिए । कुन्नि उनले रामायण पनि पढेका छन् कि छैनन् । जीवनस·िनी सीतालाई सि·ापुरमा छोडेर खोई के पुरस्कार पाउने लोभमा उनी हतार–हतार नेपाल आए–गए । दशरथपुत्र रामले आफ्नी सीतालाई ज·लमा के यसो छोडेका थिए, रावणले छल गरेर हरण गरिहाल्यो । तै प्रचण्डपत्नी सीता बिरामी र बूढी रहिछन् । कुरा के रहेछ भने भारतबाट सलमान खुर्शीद भन्ने सेतै कपाल फुलेका, जर्जर शरीरका, थरथर हात काम्ने नेता राजधानी छिरेका रहेछन् । दर्शन भेट गरेछन् । कसैकसैले प्रचण्डलाई ‘क्रान्ति नायक’ भन्दा रहेछन् । हो त नि, बिचरा हजारौं मारेर, मरवाएर, सशस्त्र क्रान्ति गरेर सत्तामा आएका रहेछन् । यो बेग्लै कुरा हो कि ज·ली कन्दमूल खाएर सङ्घर्ष गरेका उनी अहिले नेपाली नेताहरूमा सबैभन्दा धनी छन् । नसिब अपना–अपना भनेकै यही हो । बदनसीब बिचरा मोहन वैद्य हुन् । तर सेतै कपाल फुलेका सलमान खुर्शीदको दर्शनभेट गर्न उनी त्यति टाढाबाट नेपाल आएको मलाई पटक्कै चित्त बुझेन । प्रचण्ड ‘क्रान्तिनायक’ हुन् उनको दोस्ती सलमान खुर्शीदजस्ता सेतै कपाल
एक्सइमको विश्लेषण र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी
- ई. गोपाल श्रेष्ठ एक्सइम भन्नाले एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बुझिन्छ अर्थात् निर्यात–आयात । हरेक राष्ट्रले स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्नलगायत लत्ता–कपडा, इन्धन, बहुमूल्य धातु तथा गरगहना, मेशिन तथा मेशिनरी पार्टपुर्जाहरूदेखि सवारी साधनहरूको एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्दछ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तु बढी मात्रामा एक्सपोर्ट हुन सक्यो र स्वदेशको हरेक आवश्यकता स्वदेशबाट नै पूर्ति हुन सक्यो अर्थात् एक्सपोर्टले इम्पोर्टलाई जित्न सक्यो भने राष्ट्रको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदै जान्छ । तर उत्पादन, गुणस्तर र मूल्य निर्धारणका कारण राष्ट्रको हरेक आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्षम हुन सकेन भने आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक बाटोको रूपमा इम्पोर्टलाई रोज्नुपर्छ । यो अवस्थामा राष्ट्रको आर्थिक अवस्था बिग्रन्छ । हाम्रो देशको गत आव ०६९/०७० को साउनदेखि वैशाखसम्म १० महिनाको प्रकाशित तथ्याड्ढ अध्ययन गर्दा एक्सपोर्ट/निर्यात ६२ अर्ब ७० करोड ६० लाख बराबर छ भने इम्पोर्ट/आयात ४ खर्ब ९४ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख बराबर छ, अर्थात् झन्डै आठ गुना बढी । अचम्मको कुरा त के छ भने हाम्रो एउटै दैनिक उपभोग्य वस्तु पेट्रोलियम
भयावह हुन्छ वन विनाश
वन विनाशले कस्तो विभीषिका ल्याउँछ भन्ने कुरा वीरगंजमा सञ्चालित एउटा कार्यक्रममा वातावरणविदहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्याड्ढबाट प्रस्ट हुन्छ । उक्त कार्यक्रममा हामीले दैनिक उपभोगबाट उत्सर्जन गरेको कार्बनडाइआक्साइड आफ्नो स्वाभाविक मात्राबाट झन्डै १०० पिपिएम बढेको बताइएको छ । यो वृद्धि यसै मात्रामा भइरहने हो र कार्बन डाइआक्साइड शोषण गर्ने हरियाली दिन प्रतिदिन नाश भइरहने हो भने ८० वर्षपछि वातावरणमा पिपिएमको मात्रा सात सयदेखि आठ सयसम्म बढ्ने छ र त्यसको परिणामस्वरूप अहिले अचाक्ली गर्मी हुँदा ४२० सेल्सियस पुग्ने वीरगंजको तापमान ८७० सेल्सियस पुग्नेछ । अर्थात् आजको अधिकतम तापमानको ठीक दोब्बर । अहिले सामान्य अवस्थामा वीरगंजको तापक्रम ३६० सेल्सियस र असामान्य अवस्थामा ४२० पुग्ने गर्दछ । ६ डिग्री तापमान बढ्दा वीरगंजबाट लामखुट्टे गायब हुन्छ, हामी घरबाहिर निस्कन हच्किन्छौं । बजार सुनसान हुन्छ । यो तापमान ८७० पुग्यो भने हालत कस्तो होला अनुमान लगाउन गार्‍हो छैन । विडम्बना के छ भने तापमानमा वृद्धिको कारण हामीले वातावरणमा उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाइआक्साइड हो । हामीले स्वेच्छाले साँस फेर्दादेखि एसी चला
शैक्षिक संस्थाहरूमा व्याप्त विकृतिविरुद्ध नेका सम्बद्ध युवा, विद्यार्थी आन्दोलित
प्रस, वीरगंज, १३ साउन/ नेपाली काङ्ग्रेस निकट युवा विद्यार्थीहरूले शैक्षिक संस्था एवं शिक्षा सम्बद्ध निकायहरूमा भइरहेको विकृतिविरुद्ध आज वीरगंजमा जुलुस प्रदर्शनका साथै सडक अवरोध गरे। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको अगुवाइमा क्याम्पस परिसरबाट शुरु भएको जुलुस नगरको विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गर्दै माईस्थान चोकमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो। सो अवसरमा प्रदर्शनकारी युवा विद्यार्थीहरूले आधा घण्टा सडक अवरुद्ध पारेका थिए। कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले शैक्षिक संस्था र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत अनियमितता र भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको दाबी गर्दै शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि सम्पूर्ण अभिभावक, युवा, विद्यार्थी एवं बुजुर्गहरूलाई आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरे । बितेको असार २६ गते जिल्ला प्रशासन र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाएको १० सूत्रीय माग सम्बन्धमा कुनै कारबाई नभएको भन्दै युवा विद्यार्थीहरूले कारबाई सम्बन्धमा कानुनी निकाय पंगु भएको हो भने कारबाईका लागि युवा विद्यार्थी आफै सक्षम रहेको कुरा साबित गरेर देखाइदिने चेतावनी दिए। भविष्यका कर्णधार निर्माण
गाविस सचिवलाई कुटपिट गरी रु. सवा लाख लुटे
प्रस, वीरगंज, १३ साउन/ परसौनीभाठा गाविसका सचिव अवधेश साह तेलीलाई गाउँलेहरूले कुटपिट गरी सवा लाख रुपियाँ लुटेका छन्। परसौनीभाठा गाविस अन्तर्गत परसौनीभाठा, भेलाहा, बटसौरा र हसवा टोलमा दलित बालबालिका संरक्षण भत्ता वितरणका लागि पुगेका सचिवलाई स्थानीय मोहन राउत अहिरसहितको टोलीले कुटपिट गरी निजसँग रहेको रु. १ लाख २६ हजार लुटेको सचिव तेलीले बताए। दलित बालबालिका संरक्षण भत्ता वितरणका लागि गाउँ पुगेकोमा मोहन राउत अहिर, मुन्ना राउत अहिर शत्रुघ्नप्रसाद यादवलगायतले कुटपिट गरेको र दलित बालबालिका संरक्षण भत्ता वितरणका लागि ल्याएको रु. १ लाख २६ हजार कुटपिट गर्नेहरूले लुटेको आरोप लगाएका छन्। गाविस सचिव तेली कुटिएपछि गाविस हकहित संरक्षण मञ्च केन्द्रका सचिव राजेश्वर तेलीले जिप्रका पर्सामा लिखित जाहेरी दर्ता गराएका छन्। केन्द्रका सचिव तेलीले गाविस सचिव तेली उपर भएको कुटपिट, लुटपाटको घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाई गर्न माग गरेका थिए। प्रजिअले घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाई गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको बताइएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव प्रश्न: बाल क्लब दर्ता गर्न के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ? यसबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ? –नीरज गुप्ता, वीरगंज उत्तर: नीरज जी, क्लबलगायत संस्था दर्ता गराउन संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सोही कानुनको प्रावधान अनुसार दर्ता गराउनुपर्छ। कानुनको दफा ४ अनुसार संस्था दर्ता गर्न चाहने कुनै सात जना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले संस्था सम्बन्धी निम्न विवरण खुलाई संस्थाको विधानको एक प्रति र तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्छ : (क) संस्थाको नाम (ख) उद्देश्यहरू (ग) प्रबन्ध समितिका सदस्यहरूको नाम,ठेगाना र पेशा (घ) आर्थिक स्रोत (ड.) कार्यालयको ठेगाना उपरोक्त बेहोरासहितको निवेदन दर्ता भएपछि स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ। स्थानीय अधिकारीले संस्था दर्ता नगर्ने पनि निर्णय दिन सक्नेछन्। त्यस्तो दर्ता नगर्ने निर्णय गरेमा त्यसको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्रमा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले दर्ता गर्ने आ
आफ्नो कमजोरीलाई आफ्नो ताकत बनाउनुहोस्– २
अनन्तकुमार लाल दास के तपाईं त्यस्तो मान्छेको नाउँ भन्न सक्नुहुन्छ जसलाई कहिल्यै रिस उठ्दैन ? भन्न सक्नुहुन्न किनभने रिस हामीभित्र भएको एउटा स्थायी भाव हो। हामी भित्र भएको प्रकृतिप्रदत्त नौ स्थायी भाव प्रेम, करुणा, दया, हास्यजस्तै रिस पनि एउटा भाव हो। यस कारण रिस नउठ्ने मान्छेको खोजी गर्नु व्यर्थ हुन्छ। रामायणका पात्र लक्ष्मण धेरै रिसालु थिए। उनलाई हरेक कुरामा रिस उठ्ने गर्दथ्यो। उनका दाजु रामलाई रिस उठ्दैनथ्यो, तर उनलाई पनि रिस नउठ्ने कुरा थिएन। रामायणको एक प्रसङग अनुसार जुन बेला समुद्रले रामलाई लङका जाने बाटो दिन अस्वीकार गरे, उनले रिसाएर अग्निवाण निकालेको कुरा रामायणमा लेखिएको छ। तपाईं पनि कहिलेकाहीं रिसाउनुहुन्छ । तपाईंलाई कम रिस उठ्छ वा बढी, तुरुन्त रिस उठ्छ वा केही छिनपछि भन्ने कुरा बेग्लै हो तर रिस उठ्छ। प्राय: रिसलाई एउटा नराम्रो भावको रूपका हेरिन्छ, किनभने यो जुन बेला उठ्छ त्यस बेला मन र मस्तिष्क नियन्त्रणमा रहँदैन। तपाईंले के अनुभव गर्नुभएको होला भने रिस उठ्नासाथ जीउ काँप्न थाल्छ। बोली काँप्न थाल्छ। आँखा रातो हुन्छ र शरीरमा रगतको प्रवाह तीव्र हुन थाल्छ। रिसको कारण
प्रशस्त सम्भावना बोकेको आरक्षलाई चिन्न सके !
–प्रताप श्रेष्ठ तीनवटा जिल्ला पर्सा, बारा र मकवानपुरको लागि प्रशस्तै सम्भावना बोकेको पर्सा वन्यजन्तु आरक्षप्रति सम्बन्धित र सरोकारवाला दुवै पक्षको ध्यान गएको पाइँदैन। स्थापनाको तीन दशक बितिसक्दा पनि पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको अवस्था जस्तोको त्यस्तै छ। संरक्षणको क्षेत्रमा भएका केही स्वाभाविक र सकारात्मक उपलब्धिबाहेक थप प्रयासहरू हुन सकेका छैनन्। कुल ४९९ वर्ग किमि संरक्षित क्षेत्र रहेको आरक्ष आसपासको २९६.१७ वर्ग किमि क्षेत्रलाई समेटेर २०६२ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाले आरक्ष र आरक्ष आसपासका बासिन्दालाई वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि एकताबद्ध गराउने उद्देश्य रहेको भए तापनि उद्देश्यअनुरूपको लक्ष्य प्राप्ति भई नसकेको पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नीलाम्बर मिश्र बताउँछन्। संरक्षित क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित मानवबस्ती रामभौरीभाथालाई स्थानान्तरण गरी आरक्षबाहिर लाने काम भएको छ। संरक्षणको क्षेत्रमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। बस्ती स्थानान्तरण गरिएपछि रामभौरीभाथा अहिले घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ। सोही प्रभावका कारण अ
नरसंहारको तटस्थ साक्षी
सत्ताका लागि विश्वमा धेरैपटक युद्ध भएको छ, युद्धमा नरसंहार हुनु स्वाभाविक कुरा हो । तर आजको मानव समाज तटस्थ भएर नरसंहारको साक्षी बन्नु चाहिं उदेकलाग्दो कुरा हो । सिरियामा जारी गृहयुद्धमा लाखौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने हालै इजिप्टमा शुरु भएको सत्ता सङ्घर्षमा सैकडौंको मृत्यु भएको छ । भइसकेको मृत्युको कसैले भर्पाई गर्न सक्दैन तर यी युद्ध नरोकिने हो भने अझ लाखौंको ज्यान जान सक्ने अवस्था देखिएको छ । आज विश्वव्यापीकरणको युगमा, एउटा भूगोलमा भइरहेको नरसंहारमा विश्व समाज तटस्थ बसिरहन्छ भने त्यसलाई मानवतामाथि कलड्ढ नै भन्न सकिन्छ । यद्यपि यस्ता कुरामा हस्तक्षेप कसले गर्ने भन्ने कुरा विवादको विषय रहिआएको छ । अफगानिस्तान वा इराकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्‍यो, त्यसको आलोचना भइरहेको छ, विश्व संस्था–संयुक्त राष्ट्र सङ्घ स्वयं त्यति सबल छैन कि उसले आफैं हस्तक्षेप गर्न सकोस् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आफ्नो सिमाना र अधिकार छ । उसको सामथ्र्य भनेको सदस्य राष्ट्रहरू हुन्, जो यस्ता घटनाबाट आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव बढाउन चाहन्छन् । सिरियामा वर्तमान शासकको राजीनामाको मागबाट आजभन्दा तीन वर
‘नेपाल–भारत व्यापार मेला २०१३’ पुसमा
काठमाडौं, १२ साउन वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र माइन्ड्स नेपालको संयुक्त आयोजनामा आगामी पुस ३ देखि १३ गतेसम्म वीरगंजमा ‘नेपाल–भारत व्यापार मेला २०१३’ सञ्चालन हुने भएको छ । शनिवार एक कार्यक्रमका बीच वीउवासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार बैद्य तथा माइन्ड्स नेपालका अध्यक्ष मदन लम्सालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा वीउवासङ्घका उपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत मनोज उपाध्यायलगायतको उपस्थिति थियो । नेपालको प्रमुख आर्थिक केन्द्र वीरगंजलगायत वरिपरिका उद्योग, व्यापार, पारवहन, पर्यटनलगायत क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न व्यापार मेलाले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने वीउवासङ्घका अध्यक्ष बैद्यले बताए । मेलाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीहरूलाई वीरगंज क्षेत्रका बारेमा बढीभन्दा बढी जानकारी दिने उनले बताए । त्यस्तै, मेलामा वीरगंज क्षेत्रको व्यावसायिक सम्भावना तथा चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीहरूबीच अन्तत्र्रिmया गरिने माइन्ड्स नेपालका अध्यक्ष लम्सालले बताए । “अहिलेसम्म नेपालमा आयोजना गरिंदै आएका मेला तथा महोत्सवहरूमा मनोरञ्जनलाई प्राथमिकता दिंद
चुनाव बिथोल्ने दलहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउने प्रयास जारी– अध्यक्ष यादव
प्रस, वीरगंज, १२ साउन दोस्रो संविधानसभाको चुनावलाई बिथोल्ने प्रयास गरिरहेका केही दलहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउनका लागि सरकार तथा उच्च राजनीतिक संयन्त्रले प्रयास जारी राखेको मजफो गणतान्त्रिकका अध्यक्ष्ँ राजकिशोर यादवले बताए । पार्टीको भ्रातृ स·ठन सुदृढीकरणका लागि वीरगंज आएका अध्यक्ष यादवले मधेसी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेका दलहरूको सहभागिताबिना कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको चुनाव हुन नसक्ने दाबी गरे । सरकार तथा उच्च राजनीतिक संयन्त्रले ती दलहरूलाई जसरी पनि सहमतिमा ल्याउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका अध्यक्ष यादवले बताए । विगतबाट पाठ नसिकेर दलहरू अगाडि बढे मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने उनको भनाइ थियो । विगतको संविधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्न नसकेकोले आज देशको अवस्था यस्तो भएको पनि उनले बताए । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उनले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्ष्ँेत्र निर्धारण नगरेआप्mनो पार्टी आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने अध्यक्ष्ँ यादवले बताए । विगतको संविधानसभाले धेरै विषयमा सहमति गरि
बालबालिकालाई विषबाट जोगाऔं
- प्रमोद पौडेल बजारमा बेच्नका लागि राखिने खानेकुरा तथा खेलौनाहरूले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरेको छ । खानेकुरामा प्रयोग हुने र· तथा खेलौनामा प्रयोग हुने पारो, लिड जस्ता विषालु पदार्थको प्रयोगले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पारिरहेको छ । हालै भारतको विहार राज्यको गन्डमाल गाउ“मा सरकारले उपलब्ध गराएको दिउ“सोको खाजामा परेको विषका कारण २३ जना बालबालिकाहरूको जीवन अस्ताएको छ भने कयौं सिकिस्त बिरामी परेका छन् । बालबालिकालाई खान दिएको तरकारीमा समेत विषादी भेटिएको थियो । यो घटना हाम्रो शहरमा पनि हुनसक्छ । त्यसकारण समयमैं राज्य तथा अभिभावक सचेत हुनु आवश्यक छ । खासगरी आवासीय विद्यालयहरूमा दिइने खानाको गुणस्तरका बारेमा गम्भीर हुनुपर्छ । आवासीय विद्यालयको भान्साघरमा प्रयोग हुने खाद्य सामग्रीको अनुगमन हुनुपर्दछ । क्षणिक लाभका लागि बालबालिकालाई विषादीयुक्त खाना त खुवाइरहेका छैनन् भन्ने बारेमा सरकार तथा अभिभावक सचेत हुनुपर्छ । समस्या बल्झिएमा एक अर्कामाथि दोष थोपार्दै शैक्षिक वातावरण बिगार्नुको कुनै अर्थ हु“दैन । अभिभावकले पनि बालबालिकालाई जड्ढ पूmडबाट टाढा राख्नुपर्छ
भोजपुरी बालगीत तथा कथा–४
- उमाशङ्कर द्विवेदी बालक हिंड्न, बस्न र बोल्न थालेपछि आप्mनो सामुन्ने उपस्थित भएका विभिन्न वस्तुहरूप्रति उसको उत्सुकता प्रखर रहेको हुन्छ तथा ऊ प्रत्येक कुराको वास्तविकता जान्न खोजिरहेको हुन्छ । यस क्रममा घरमा यताको वस्तु उता, उताको वस्तु यता गर्न थाल्दछ । चाहिने नचाहिने उपद्रो गरेर आमालाई हैरान पार्दछ । उसको चकचकेपनले आमालाई घरधन्दा सम्हाल्नमा विघ्न–बाधा उत्पन्न गर्दछ । बालकको यस्तो बाललीला वास्तवमा भन्ने हो भने मनोमुग्धकारी त हुन्छ । तर, घरधन्धाको चटारोलाई साम्य पार्न पनि आवश्यक नै हुन्छ । बालकको यस्तो अवस्थामा बालगीत तथा कथाहरूले उसको मनमस्तिष्कको विकास गर्न निकै सघाउ“छ । यस्तो स्थितिमा बालकलाई सम्हाल्नको निम्ति भोजपुरी भाषामा बालकथाहरूको ठूलो राश नै पाइन्छ । बालकथा वास्तवमा लय हालेर गीत गाइने खालका हुन्छन् । यस्ता कथाहरूले बालकको मेधा वृद्धि गर्नुका साथै नीति निपूण बनाउनमा पनि निकै मदत पु¥याउ“छ । यस्ता कथाहरू शिक्षाप्रद हुनुका साथै बालकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नमा पनि सहायक सिद्ध हुन्छन् । यहा“ भोजपुरी भाषाका केही बालकथाहरूको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । भोजपुरी बालकथाहर
दुई बहुमूल्य उपहार
प्रत्येक व्यक्तिलाई ईश्वरले दुई बहुमूल्य उपहार दिएका छन्– बुद्धि एवं भावना । यी दुई यस्ता चीजहरू हुन्, जसको सही उपयोगको आधारमा एकातर्पm व्यक्तिले सांसारिक जीवनमा आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ भने अर्कोतर्पm आध्यात्मिक जीवनमा विशेष प्रगति गर्न सक्दछ । तर यसका साथ दुई शर्तहरू छन्– पहिलो त बुद्धि एवं भावना, दुवै परिष्कृत हुनु र दोस्रो शर्त हो– यसको सही सुनियोजन हुनु । सही सुनियोजनको तात्पर्य हो कि जहा“ बुद्धिको प्रयोग हुन्छ, त्यहा“ भावनाको प्रयोग हुनुहु“दैन र जहा“ भावनाको प्रयोग जरुरी छ, त्यहा“ बुद्धिको प्रयोग हुनुहु“दैन । जहा“ दुवैको आवश्यकता पर्दछ, त्यहा“निर बुद्धिको अनुसार भावनाको सही प्रयोग हुनुपर्दछ । भावना एवं बुद्धिको हाम्रो जीवनमा हर समय उपयोग हुन्छ । यसको सही बुझाइ नभएको कारण व्यक्ति आप्mनो जीवनमा अनेक बहुमूल्य अवसरहरूबाट वञ्चित हुन्छन् । भावना जीवनको रस हो भने बुद्धि त्यस रसको सही उपयोग गर्ने विधा हो । भावनाहीन व्यक्ति त्यस पशु समान हुन्छ, जसलाई मानवीय संवेदनाको कुनै समझ नै हु“दैन । यसैगरी व्यक्ति दुष्ट बन्छ र आप्mनो सुखको लागि अरूलाई कष्ट दिन्छ । यस संसारको एउटा ख
जनतान्त्रिकका सैन्य कमान्डर अग्नि पक्राउ
राजेश केशरीवाल, रक्सौल, ११ साउन/ सशस्त्र भूमिगत विद्रोही जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (प्रकाश) का पर्सा, बारा, रौतहट सैन्य कमान्डर अग्नि भनिने सुनील जयसवाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अग्निलाई नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीको संयुक्त सुरक्षा टोलीले गएराति आदापुरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । २०६६ साल पुस २२ गते गंजभवानीपुर–२ बस्ने रामप्रकाश यादव, निजका भाइ कन्हैया यादव, भान्जा द्वारप्रसाद यादव र सोही गाविस–९ का अम्बिका महतो नुनियालाई हत्या गरेको अभियोग लागेपछि फरार जयसवाल भारत, आदापुर आसपास क्षेत्रमा लुकी छिपी बसेका थिए । भारतीय प्रहरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले पक्राउ गरेको अभियुक्तलाई तत्कालै नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको भारत रक्सौल थाना प्रभारी जितेन्द्र पाण्डेले बताए । नारायणी अञ्चल प्रहरी कार्यालय, वीरगंजका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले लामो समयदेखि खोजीसूचीमा राखी नेपाल भारत प्रहरीले खोजतलास गरिरहेको निजहरू यसपटक पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । उनले पक्राउ परेका जयसवाल भारत प्रहरीकै जिम्मामा रहेको बताउँदै नेपाल ल्याएको कुरा अस्वीकार गरे । सिकेन्
मारवाडी सेवा समितिद्वारा फ्रिज हस्तान्तरण
प्रस, वीरगंज, ११ साउन/ मारवाडी सेवा ट्रस्ट राणीसती अतिथि सदनले आज एक कार्यक्रम गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सा रक्तसञ्चार केन्द्रलाई एक थान फ्रिज हस्तरान्तरण गरेको छ । मारवाडी सेवा ट्रस्ट एक सामाजिक संस्थाको रूपमा स्थापित भएकोले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आएको संस्थाका अध्यक्ष हीरालाल केडियाले बताए । फ्रिज हस्तान्तरण कार्यक्रममा केडियाले प्राप्त जानकारीको आधारमा आवश्यकता भएको क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्ने गरेको बताए । संस्थाका उपाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवालले यस संस्थाले शिक्षा स्वास्थ्य लगायत धार्मिक कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । सामाजिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल यस संस्थाले आवश्यक परेको बेला सामाजिक क्षेत्रमा अझै पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । संस्थाले उपलब्ध गराएको एक थान फ्रिजबाट रक्तसञ्चार केन्द्रलाई निकै सहगोग पुग्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष फुलमहम्मद मियाँले बताए । रक्तदान कार्यक्रममा धेरै मात्रामा रक्रदान हुँदा रगत राख्न समस्या भइरहेको बेला नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले फ्रिजको लागि सहयोग मागेको अध्यक्ष मियाँले बताए
मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुनेमा शङ्का– यादव
सिकेन्द्र पासवान, कलैया ११ साउन/ मधेसी जन अधिकार फोरम गणतान्त्रिकका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजकिशोर यादवले संविधानसभाको दोस्रो निवार्चन मङ्सिर ४ गते हुनेमा शङ्का रहेको बताएका छन् । कलैयामा पार्टी प्रवेश तथा कार्यकर्ता भेटघाट एवं छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको रवैया र ठूला चार राजनितिक दलको हैकमवादले निर्धारित समयमा चुनाव हुन आशङ्का बढेको उनले बताए । मुलुकको एक मात्र निकास संविधानसभा निवार्चन भएकोले भयमुक्त अवस्थामा र बढीभन्दा बढी जनताको सहभागितामा चुनाव गराउन सबै राजनीतिक दलहरूलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरे । आत्म अधिकारको निर्णयसहित श्वेत प्रदेश निर्माण, समतामूलक समाज स्थापना गर्न आफ्नो पार्टी लागिपरेको बताउँदै उनले मधेसी जनताको भवनाविपरीत केही मधेसवादी दलहरूले कुर्सी र पैसामा लागेर मधेसको मुद्दा बिर्सेको आरोप लगाए । मधेसीमाथि भइरहेको विभेदको अन्त्य गरी राज्यका सबै निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भए मात्र मुलुकमा स्थायी शान्ति र विकास सम्भव हुने भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थायित्व हुने उनले जिकिर गरे । पार्टी जिल्ला अध्यक्ष रामकिशोर यादव
– रमेश पटेल एउटा गाउँमा एकजना मध्यमवर्गीय किसान बस्दथ्यो । किसानका तीनजना छोराहरू थिए । छोराहरू यौवनावस्थामा पुगिसकेका थिए । किसानले आफू बुढेसकाल लागेपछि जेठो छोराको विवाह गरिदिएको थियो । किसानसँग एक बिघा जति खेत थियो तर घडेरी सानो थियो । त्यसैमा तीन कोठाको एउटा घर बनाएको थियो । तीन कोठाको उक्त घरको एउटा कोठा जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको थियो । बिस्तारै बूढाबूढीको आयु छिप्पिदै गयो र एक वर्षकै अन्तरालमा दुवैजनाको मृत्यु भयो । आमाबुबा जीवित छँदासम्म तीन भाइछोराहरूले कहिल्यै झगडा गरेनन् । जेठाको नाम पुष्कर, माहिलाको सन्देह र कान्छोको नाम बहादुर थियो । पुष्कर र सन्देह बाठा थिए भने बहादुर अलि लाटो थियो । बहादुरलाई गाउँका अधिकांश मानिसहरूले लाटो भनेर बोलाउँथे । आमाबुबाको मृत्युपश्चात् सन्देहले पनि बिहे गर्‍यो । त्यसपछि घरको कामलाई लिएर पुष्कर र सन्देहका पत्नीहरूबीच दिनहुँजसो झगडा हुन थाल्यो । दिन बित्दै जाँदा पुष्कर र सन्देहले आ–आफ्नो पत्नीको पक्ष लिएर झगडा गर्न थाले । दुवैजनाले अलग–अलग खाना बनाएर खान थाले । आफ्नो पक्षमा नबोलेको भन्दै लाटोलाई पुष्कर र सन्देह दुवैले कुनै वास्ता गरेनन् ।